Shan gef oo waalidku ku il-duufo carruurtiisa! | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / Shan gef oo waalidku ku il-duufo carruurtiisa!
Shan gef oo waalidku ku il-duufo carruurtiisa!
Posted by: Mahad Mohamed August 8, 2020
Himilo – Waxaynu dib u sheegi karna gafaf muuqda oo badan oo aan waalidkeen ka galnay kolkii aynu caruurta aheyn. Siyaalaha qaar, gafafka way kaaga xusuus badan yihiin wax-qabadka dhowrsiga ah ee waalidku aanu noo qaban. In-kasta oo, ka waalid ahaan, qalad ay ku dhacaan, hadana waa muhiim inaynu ku foojiganahay il-duufyada aan ku xaqiijinayno soo saarista jiil cusub oo Muslim ah oo akhlaaq ku barbaara.
Hadaba halkan waxay idin kugu soo gudbineynaa shan walxood oo waalidku ku kadsoomo marka uu tarbiyeynayo carruurtiisa ama aanu dareesaneyn saameyntooda:
1. Cara-ku-dhaqaaqista ilmaha markay qalad sameeyaan: halkii ay habboonaan laheyd inaan miyir dagan iyo maskax foojigan ku wareysan laheyn ilmaheenna, waxaynu ku qaabilnaa indha-kulul iyo xanaaq.
2. Isku barbar-dhigista dhexdooda: Waalidiin badan, halkii ay caruurta ku oran lahaayeen; “Waad fiican tahay, u dadaal sida Cali”, waxay ku yiraahdaan ereyo qalafsan oo qalbigiisa wax u dhima sida damiin iyo dab-ku-dhuus! Inaad ubadkaaga hiigsi u sameysaa, waxay ku hagtaa inuu ku hirto himilo qurux badan. Hayeeshe, hankiisa oo jaba kuma imaato dadaal-yaridiisa oo kaliya. Waxay ku imaataa dulqaad-yarida waalidka.
3. Samey sida aan ku dhaho, ha falin sida aan sameeyo: Waalidku waa tusaalaha koobaad ee caruuru tiigsadaan. Waxaa dhacda in hooyadu aanay kicin salaatul-leylka, marka sidee ayay ilmaheeda ugu sheegi karaa inay salaatul-leyl usoo kacaan?! waxyar oo aan si joogto ah u sameyso ayaa ku habboon inaad ilmahaaga ku tirtiirso inay kula falaan. Halkii aad erey ku amri laheyd oo kaliya.
4. Qadarin la’aan caruurta: Waalidiin badan caruurta ma siiyaan qadarinta ay mudan yihiin. Ilmahaaga waa inaad talada reerka wax ka siisaa. Haddii aad maanta talada u diido, goormay talada kula wadaagayaan?!
5. Inaad wacnaan-ka-filato: Aalaaba markaynu aragno caruurteenna oo fal-xun sameyneysa, waxaynu niraahdaa; “Maxaa ka siya?!” Balse xusuusnow qofna ma ahan dhameys! Ma nihin inagu mana ahan caruurteenna! Naxariista iyo dulqaadka waa waxa qofka ku kaalmeyn kara hanashada qofnimadiisa.
Previous: 99 jir noqotay qofka ugu da’da weyn caalamka ee duulisa diyaarad
Next: PSG oo Liverpool kaga hormareysa saxiixa Thiago Alcantara